किन पुरुस भन्दा महिलाले छिटोछिटो हस्तमैथुन गर्छन ? - Sudur Khabar
किन पुरुस भन्दा महिलाले छिटोछिटो हस्तमैथुन गर्छन ?
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७५, बुधबार १८:०२
”पुरुस भन्दा महिलाले छिटोछिटो हस्तमैथुन गर्छन किन ?” महिलाहरूको यौन अङ्ग विशेष गरेर अलि भित्र तिर हुने भएको हुनाले होला कतिपय महिलाहरूले पुरुषको दाँजोमा आफ्ना यौन अङ्गहरूलाई राम्ररी नियालेर हेरेका हुँदैनन्। आफ्नै अङ्गहरूका बारेमा आधारभूत जानकारी राख्नु आवश्यक कुरा हो।
हस्तमैथुनको थालनी आफ्नो शरीरबारे, त्यसमा पनि विशेषगरी यौनअङ्गबारे जानकारी पाउने कार्यमा सहयोगी हुन सक्छ। विशेष गरेर किशोरावस्थामा यौन चाहना तीव्र हुँदा हस्तमैथुन यौनेच्छा शान्त पार्ने एक राम्रो विकल्प हो। महिलाहरूले हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने ठान्नेहरू पनि छन् तर महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्ने गर्छन्। किन्सेले गरेको अध्ययनमा सोधिएकामध्ये ९२ प्रतिशत पुरुषले हस्तमैथुन गरेको कुरा बताएका थिए भने ६२ प्रतिशत महिलाहरूले, तर पछि गरिएका अध्ययनमा ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएको छन्।
महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्न सक्छन् ? महिलामा प्रत्यक्ष रूपमा योनिलाई नै यौनअङ्ग ठानिन्छ। महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्गहरू पनि यौनको दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन्। जस्तै कि भगक्षेत्र, ठूलो तथा सानो भगोष्ठ, भगाङ्कुर, स्तन। त्यसदेखि बाहेक मुख तथा अधर, नितम्ब, गुदद्वार, मलाशय, चर्म ९छाला० लाई हामीले यौन अङ्गका रूपमा लिने नगरे पनि हामीले पाउने धेरैजसो यौन सुख यही अङ्गबाट प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं। जाँध, तिघ्राको भित्री भाग, धाँटी, काखी यौन संवेदनशील हुनसक्छन्। स्पर्शको अनुभूति विभिन्न किसिमको हुन सक्छन् जस्तै कि मर्दन, हल्का स्पर्स, सुम्सुम्याइ आदि।’ पुरुषको भन्दा महिलाहरूको हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा विविधता बढी हुन्छ। महिलाहरूले विभिन्न यौनअङ्गहरूलाई प्रयोगमा ल्याई हस्तमैथुन गर्ने देखिएको छ। हस्तमैथुन गर्दा यौन परिकल्पना एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
हस्तमैथुन गर्दा आफूले चाहेअनुरूप यौन क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, स्थान अनि आसनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यसमा मानसिक पक्ष सबल रूपमा जोडिएर आनन्द झन् थपिन्छ। भगाङ्कुर चलाउनुः भगाङ्कुर चलाउनु वा यसको घर्षण नै महिला चरमसुखमा पुग्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण यौन क्रियाकलाप हो। यस्तै ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्रका रूपमा यो नै हुन्छ। आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुराले यसलाई चलाउन सकिन्छ। चलाउने वा घर्षण गर्नेदेखि बाहेक दबाब दिने, विस्तारै हल्लाउने वा जोडले हल्लाउने वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सक्नुहुन्छ। पानीको हल्का फोहराको प्रयोगलाई पनि कतिपय महिलाहरूले विशेष उत्तेजना प्रदान गर्ने कुराको रूपमा लिएका छन्। योनिमा केही पसाउनुः योनिमा केही पसाएर यौन आनन्द लिन सकिन्छ। यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वाभाविक रूपमा नै हुन्छ।
यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थको प्रयोग भने बिर्सनुहुँदैन। यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यौन प्रसाधनको प्रयोगः भगाङ्कुर होस वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्वपूर्ण हुन्छ। औंला बहुउपयोगी हुने भएको हुनाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले आनन्द थप्छ नै। यीदेखि बाहेका महिला शरीरको अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुम्सुम्याई यौन आनन्द पाउने कुरामा सहायक नै हुन्छन्। अचेल यसरी यौन आनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्ने गर्छन्। अंग्रेजीमा ९भ्राइबेटर० भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न किसिमको आकार तथा प्रकारमा पाइन्छन्। तुलनात्मक रूपमा यसको प्रयोगले यौन आनन्द प्राप्त गर्न सजिलो भएको हुनाले पनि यसलाई कयौं महिलाहरूले मन पराएका पनि छन्।
केही असर गर्छ कि ?’ हस्तमैथुन एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यसैले यसले हानी गर्दैन। हस्तमैथुन गर्दा कौमार्य भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। योनिमार्गको द्वारमा हुने एक पातलो छालाको झिल्ली ९योनिच्छद, जसलाई अंग्रेजीमा हाइमेन भनिन्छ० च्यातिनुलाई नै कुमारित्व भङ्ग भएको ठानिन्छ, तर योनिच्छद छ वा छैन भन्ने आधारमा पहिले जस्तो कुमारित्वु कायम भए नभएको कुराको मापन गर्ने जमाना अब रहेन। वास्तविक रूपमा कुमारित्व भङ्ग हुनु वा नहुनु भनेको कुनै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क भएको छ वा छैन भन्ने आधारलाई मान्दा हस्तमैथुन गर्नुलाई कुमारित्व भङ्ग हुने कारकको परिभाषामा राख्नै मिल्दैन। हस्तमैथुनले कतै योनि खुकुलो हुन्छ कि भन्ने चासो हुने भए पनि त्यसमा सत्यता छैन। फाइदा ???’
सर्वप्रथम त हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। तनावबाट मुक्त मानिस बढी सकारात्मक रुपमा सिर्जनशील हुन सक्छ। यसरी यौन चाहना शान्त पार्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले कतिपय यौन अपराधलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्नेहरू पनि थुप्रै छन्। यस्तै हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, अन्य व्यक्तिसँगको यौनसम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समयको दुरुपयोगबाट पनि बचाउँछ। अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एचआईभीरएड्स वा अन्य यौनरोगहरू लाग्नबाट पनि बचाउने नै भयो। विवाहपछि पनि श्रीमान् श्रीमती दुवैजना मिलेर कसरी यौन आनन्द बढी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी वा छलफल गरेर विभिन्न प्रयोगहरूद्वारा दुवै जनालाई आनन्ददायी हुने उपायको खोजी र अबलम्बन गर्न सक्नु हुन्छ भीडीयो हेर्नको लागि तल क्लिक गरेर प्ले गर्नुहोला ”पुरुस भन्दा महिलाले छिटोछिटो हस्तमैथुन गर्छन किन ?”